ရှထေူးနဲ့ ပကျသကျမှု အတိုငျးအတာကို ရှငျးပွလိုကျတဲ့ မိုးစကျဝိုငျ – Media9
ရှထေူးနဲ့ ပကျသကျမှု အတိုငျးအတာကို ရှငျးပွလိုကျတဲ့ မိုးစကျဝိုငျ
May 11, 2018 by media9
ယခု ဖေ့စ်ဘွက်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုများနေတဲ့ ရွှေထူးတို့စုံတွဲကွဲသွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ရွှေထူးနဲ့ မိုးစက်ဝိုင်နဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ပက်သက်သလဲ ဆိုတာကို မိုးစက်ဝိုင်က ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ ရွှေထူးနဲ့ ပန်ကိတ်နဲ့ကွဲကြတာဟာ မိုးစက်ဝိုင်ကြောင့်လို့ ပြောနေကြတဲ့ပို့စ်တစ်ရဲ့ အောက်မှာ မိုးစက်ဝိုင်က ကောမန့်ပေးရင်း ပရိတ်သတ်တွေကို ရှင်းပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးကိုချစ်တယ် . နှစ်ယောက်လုံးကလည်းချစ်တယ် .နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ မောင်နှမသူငယ်ချင်းထက်ပိုသော ဆက်ဆံရေး တခါမှမရှိခဲ့ . စောင့်ကြည့်လေနော် . အေးဆေးကြည့်ပါ .သူတို့နစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လက်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ် . မိမိစာဖတ်သူများအား အားနာတာဝန်ယူစိတ်လေးဖြင့် မှန်သောသတင်းတင်ပေးရင်ကောင်းပါမယ် .
စာဖတ်သူများလည်း သတိလေးနဲ့ ဆင်ခြင်ပြီး ယုံကြပါလို့ပဲ ရေးလိုက်တော့မယ် နော် . ဒီစာကိုရေးတာ ရွှေထူးနဲ့ အမူပတ်မှာစိုးလို့ မဟုတ်သလို ပန်ကိတ်အထင်လွဲမှာကြောက်လို့လဲမဟုတ်ဘူး . မိုးစက်ဖန်တွေ ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ရူပ်ကြဦးမယ် ပြီးတော့ တချို့ ယုံလွယ်သူများ အကုသိုလ်နေရင်းထိုင်ရင်းရဦးမယ်. ဆိုပြီး ရှင်းပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ဖစျေ့ဘှကျလူမှုကှနျယကျပျေါမှာ စိတျဝငျစားမှုမြားနတေဲ့ ရှထေူးတို့စုံတှဲကှဲသှားပွီးတဲ့ နောကျပိုငျး ရှထေူးနဲ့ မိုးစကျဝိုငျနဲ့ ဘယျအတိုငျးအတာထိ ပကျသကျသလဲ ဆိုတာကို မိုးစကျဝိုငျက ရှငျးပွလိုကျပါတယျ။ ရှထေူးနဲ့ ပနျကိတျနဲ့ကှဲကွတာဟာ မိုးစကျဝိုငျကွောငျ့လို့ ပွောနကွေတဲ့ပို့ဈတဈရဲ့ အောကျမှာ မိုးစကျဝိုငျက ကောမနျ့ပေးရငျး ပရိတျသတျတှကေို ရှငျးပွလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နှဈယောကျလုံးကိုခဈြတယျ . နှဈယောကျလုံးကလညျးခဈြတယျ .နှဈယောကျလုံးနဲ့ မောငျနှမသူငယျခငျြးထကျပိုသော ဆကျဆံရေး တခါမှမရှိခဲ့ . စောငျ့ကွညျ့လနေျော . အေးဆေးကွညျ့ပါ .သူတို့နဈယောကျမှာ ကိုယျပိုငျလှတျလကျစှာဆုံးဖွတျခှငျ့ရှိပါတယျ . မိမိစာဖတျသူမြားအား အားနာတာဝနျယူစိတျလေးဖွငျ့ မှနျသောသတငျးတငျပေးရငျကောငျးပါမယျ .
ခတျေရစေီး ဆယျလီ အနုပညာ
အနာဂါတျမှာ အသုံးပွုမယျ့ မိုးပြံ Taxi ပုံစံကို ပွသလိုကျတဲ့ Uber
ဖဘေု့တျပျေါက ဓာတျပုံတဈပုံကွောငျ့ အံ့အားသငျ့ခဲ့ရတဲ့ ဖှေးဖှေး
ငါနဲ့တူတဲ့သူရှိပါသေးလားဆိုတဲ့ ခံစားခကျြမြိုး သူနဲ့ တှတေ့ော့စပွီးခံစားရတယျ…
အိမျထောငျပွုဖွဈမယျမပွုဖွဈဘူးဆိုတာကိုယျကိုတိုငျတောငျမသိဘူးဆိုတဲ့ Nadi Wint Naing
အိမျ ခွံ မွေ (7)